I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike yasePenylpiracet
/Blog/Ithala/I-7 Best Nootropics (SmartDrugs) kwimarike -Phenylpiracet
ezaposwa ngomhla 09 / 12 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala. Ibe 50 Comments.
Phenylpiracetam iyimveliso ye-phenyl ye-piracetam ye-nootropic. Iyakwandisa ukusebenza komzimba kwaye iphakamisa umda wokunyamezela ngokubanda kunye nokuxinezeleka. Uphando lwezilwanyana lucebise i-antiamnesic, antidepressant, anticonvulsant, antipsychotic, anxiolytic kunye nemiphumo yokuphucula imemori. Kuthathwa njengolu hlobo olushukumisayo kwaye luluhlu lokudinga. Yayilungiswa kwi-1980 eRashiya mhlawumbi kwimisebenzi yempi kunye nemidlalo.
Amanye amaPhenylpiracetam amagama
• (RS) -2- (4-phenyl-2-oxopyrrolidin-1-yl) i-acetamide
• (±) -2- (4-phenyl-2-oxopyrrolidin-1-yl) i-acetamide
Ifomula ye-molecular C 12 H 14 N 2 O 2
Izikhombisi zangaphandle / iinkcukacha
Inombolo yeCAS 77472-70-9
Ubuninzi be-Molar 218.26 g · mol -1
Ifom yefom ye-compound ine-isomers ezimbini: S kunye neR. Zombini zinempembelelo enhle kwi-psyche njengengcinezelo. Nangona kunjalo, i-R-isomerom inamandla, ekubeni, ngokungafani nefom ye-S, ukongezelela ichaphazela imisebenzi njengememori kunye nentetho. Yenza usebenziso lwe-neural engqondweni, luphucula ukusetyenziswa kwe-RNA, lubonelela ngegazi elifanelekileyo. Kukho uhlobo lwesithathu lwe phenylpyrazetam (phenotropil) - SR. Umxube wezobuhlanga weesomsi zombini, ezidibanisa iimpahla zazo. Okwangoku, i-R-isomerom ecocekileyo yeziyobisi ayifumanekanga. Ngoko ke, qaphela ukuba uthenge i-phenylpyricetam iya kuba nefuthe elibuthathaka. Ukuba umyinge ukwanele, mhlawumbi mhlawumbi yiyo ifom ye-S yolu hlobo. Iimveliso zethu ziqukethe ifom ye-SR, kwaye inayo yonke inzuzo yesilwanyana.
Phenylpiracetam Inkcazelo ngokubanzi
Seye isetyenziswe kubantu njengento ekhuthazayo ye-CNS, inkqubo yokuqhubela phambili, ukusebenza kwezemidlalo kunye ne-nootropic, kwimeko apho i30-60 amaxesha angaphezu kwepiracetam. Izifundo zezilwanyana zibonakalisa i-antiamnestic, anti-depressant, i-anticonvulsant, antipsychotic, i-anxiolytic kunye nomsebenzi wokuphucula imemori.
Carphedon powder Pharmacology
Zimbalwa zifundo zonyango ezincinane zibonise ubudlelwane obunokwenzeka phakathi kwemithi ye-carphedone kunye nokuphuculwa kwezimo ze-encephalopathic, ezinjengezilonda zamanzi e-cerebral, i-craniocerebral trauma kunye neentlobo ezithile ze-glioma.
Ibuyisela isenzo esicinezelayo se-benzodiazepine diazepam, siphucula indlela yokuziphatha, iyanciphisa i-post-rotational nystagmus, ikhusela ukuhlaziya i-amnesia, kwaye inempahla ye-anticonvulsant.
Mhlawumbi, i-phenylpyracetam inokuthiwa yinye yezilwanyana ezinamandla kakhulu ze-nootropic zexesha lethu. Yadalwa ngokuchanekileyo kwimpembelelo enamandla kwizifo ezinzulu ezinxulumene nokukhathazeka kweememori, intetho, okanye ukulungelelaniswa kwezihamba. I-Phenylpyracetam kaninzi i-formula ephakanyisiweyo, eyaziwayo ukususela ngexesha leSoviet Union yezinto ezibizwa ngokuba yi "pyracetam." Ukongezwa kweqela le-phenyl kuye kwanegalelo ekuphuculeni kwi-pharmacokinetics yesilwanyana (umzekelo, ukunyuka okugqithiseleyo ngakumbi i-blood-brain-barrier), eyenza ibe namandla kwaye ikhawuleze.
I-Phenylpiracetam powder Iimfuno kunye namayeza
I-Nootropin phenotropil (phenylpyrazetam) kwiiksululwazi inamanyathelo alandelayo:
• isebenza umsebenzi wengqondo;
• kuphucula imisebenzi yokuqonda;
• kukhawuleza inkqubo yokudluliselwa kweentsholongwane zentsholongwane kwinkqubo yesantya ephakathi;
• ukwandisa ukusebenza komzimba;
• kuphucula iimoya;
• kwandisa ukunyanzeliswa kwengcinezelo;
• kukhuthaza ukukhuseleka;
• kuphucula umboniso kunye nokujikelezwa kwegazi (ngakumbi izitho);
• ineempembelelo ezichasayo kunye neziphumo kunye nezinye.
Isisombululo sezinto zihluka kwi-100 ukuya kwi-250 milligrams ngosuku, emva koko ikhefu leentsuku ze-30 kufuneka zenziwe. I-Phenylpyracetam ayibangeli umlutha kunye neempawu zokuyeka.
Phenylpiracetam powder - Imiphumo emibi kunye nokuchasene
Phakathi kwemiphumo emibi ingabonwa ngokukhawuleza. Kukho ukusila xa uthabatha into emva kwe-4 pm, ngoko kufuneka utywala ekuseni. Abantu abajongene nokunyuswa kwengcinezelo yegazi, kunokunyuka kakhulu, ngoko-ke, kulo mzekelo, kufuneka uthabathe inkunkuma leyo. Ukuchasana okuphambili ekusebenziseni le nkunkuma kukunyanzelwana komntu.
Uphononongo malunga nePenylpiracetam
Ukuphonononga malunga neepsulules ze phenotropil (phenylpyrazetam) zingenangqiqo. Ngokuqhelekileyo, abantu bathabatha iziyobisi ezithe zafumana amandla, i-vivacity, ukuphucula ubuthongo, imemori kunye nomoya, ukunyuswa kwengqondo. Abanye abantu, ngokuchasene noko, bathiwa banqotshwa ngumbono wokulala nokubuthathaka. Kufuneka ukhunjulwe ukuba ukuphendula okunjalo kuvela ngenxa yokukhathala ngokweqile, uxinzelelo kunye nokuphelelwa kwengqondo. Akukhuthazwa ukuthatha i-phenylpyracetam ngaphandle kokuqeshwa kogqirha.
I-Phenylpiracetam Ngaba Iphumelele?
Ukuba isilwanyana siboniswe kwiintlobo zokudada, kunengqiqo ukucinga ukuba kusebenza. Kulapha kuphela kusebenza kuphela ixesha elithile. Ewe, uya kwenza okungakumbi. Kwaye kwenzeka ntoni emva kweentsuku ze-2? Umgca wecala kukuba amandla kunye nomsebenzi wongezwa kwi-nootropil eqhelekileyo, ukuba ndingathi njalo. Futhi i-nootropil (oko kukuthi, i-piracetam) iqala ukusebenza emva kweeyure ze-2. Kuvela ukuba impembelelo yokuthatha i-phenotropil, sithetha ukuba yimpembelelo ye-nootropic yangempela, iza kuqala kwiintsuku ze-14. Kodwa kuye uya kufumana i-2 yeveki ye-vivacity. Nangona kunjalo, ukunyamezela, ukuxhatshazwa kweziyobisi (iqela elidumiweyo leqela eliphangaleleyo) liphuhliswa, ngoko ke ukusetyenziswa kwayo kwexesha elide kungenanto.
I-Phenylpiracetam (iCarphedon) ipowder Isisiseko, ukhuseleko, ubuninzi bokusela.
Sikholelwa ukuba kungakhathaliseki ukuba uxelelwe njani ukuba "isilwanyana siphephile ngokupheleleyo," asikhuthazi ukusetyenziswa kwayo ngaphezu kweeveki ze-3, kukunciphisa kakhulu ngenxa yeeurotransmitters ezisebenza ngokukhawuleza. Enyanisweni, kwimbono yethu, kulungile ukusebenzisa i-phenotropic episodically, okanye iikhosi ze-2-3 iiveki kwaye uyiphatha njengendlela "yeTurbo Mode".
Ukufezekiswa kwezenzo ze-nootropic, njengoko sele zikhankanywe, kuyimfuneko ukusela ubuncinane iiveki ze-2 ngasentla. Kwiphakheji uya kubona ukuba kuthathwa kwiinyanga ze-3, i-clevermind.ru ibona, ngokukhethekileyo, ukunyuka kwezorhwebo, kuba intengo yalo mangaliso imalunga ne-ruble ye-800 (ekupheleni kwe2014). Ngoko, ukwamkela iiveki ze-3:
Kuye kwaqulunqwa ngokuqinisekileyo ukuba ubunzima bomntu bunendima ebalulekileyo xa ungezantsi kwe-70 kg: ithebulethi ye-1 (100 mg) rhoqo ekuseni, ukuba akukho miphumo, yongeza enye enye, okanye ngekanye, okanye kwiiyure ze-2-3 .
Ungaphezulu kwe-70 kg: qala nge-1st, ngoko kuya kufuneka ukuba utshintshe kwi-2 okanye kwi-3 ngosuku.
Carphedon powder Kuthatha ixesha elingakanani ukuphumeza?
Isilwanyana sinemisebenzi ye-2 kwisantya sokuvela:
1. Ngeeyure ze-5-6. Imibala icacile, amandla, ingcamango. Akukho nwabilo, uya kuziva uqokelelwe kwaye uzimisele, kodwa uya kuqonda oku kuphela xa umphumo weli gciwane uphele. Ixesha eliphakathi "cinga ukwenza" lifutshane, kwaye ngeli xesha lilungile ukuba ungenzi iimpazamo. Intetho ihamba ngokukhawuleza, ndifuna ukuthetha ngezinto zonke, kodwa ukuba akukho zindlebe ezongezelelweyo, funda, bhala, inkqubo, ekupheleni. Omnye umphumo onomdla kakhulu-ndifuna ukuba wonke umntu akhulume ngokukhawuleza okanye ufunde incwadi ngokukhawuleza ukuba udle amagama. Abadlali bebhola bayavuya.
2. Kwiintsuku ze-10-14. Imemori kunye nenqaku liphuculwe kangangoko, njengokuba kunjalo nangama-nootropiyard. Iingubo ezipheleleyo zePHD zikhutshwe, ngoko unokwenza "uphupha amaphupha".
Xa umele ulinde umphumo?
Emva kwemizuzu ye-20-60, kuxhomekeke kwisitetabolism sakho (imetabolism). Impembelelo yeNootropic - emva kweentsuku ze-10-14.
I-50 Impendulo Amazwana
Vikram Parmar09 / 21 / 2018 kwi-10: 26 ntambama
Liyithuba elixhasayo. Ndazi malunga nezinto eziphathelele ukulahleka kwesisindo kwi-intanethi.
Mog Arten09 / 21 / 2018 kwi-4: 25 ntambama
Andiyi kukholwa lonke utshintsho lomzimba wakho uya kuhamba ngokuthatha i-powder yeCardon. "Iiphupha ezikhokelweyo" zivakala ngokukhethekileyo kuzo zonke iziphumo ezidweliswe kwiNootropics. Ndivakalelwa ngathi kufuneka uthathe ezi zinto zongezekileyo ukuze uqonde ngokwenene zonke iingenelo zabo.
Miles Dubager09 / 21 / 2018 kwi-4: 17 ntambama
Isandi njengeziyobisi ezinamandla ekuphuculeni ubuchule bengqondo nangokwenyama kubomi bemihla ngemihla. Ndiyathanda ukuba akudingeki ukuba uxhomekeke kwiPhenylpiracetam ngonaphakade kwaye ukuba imiphumo kunye nemilinganiselo zichazwe ngokucacileyo.
URenan David09 / 21 / 2018 kwi-8: 54
Ndingumtsha kwii-nootropics, kwaye eli nqaku linceda ngokwenene. Abahlobo bam baqhubeka bethetha ngabo, kwaye ndifuna ukubona kwaye ndizame oko oko kuthethwa ngako.
admin, admin09 / 21 / 2018 kwi-3: 40
Ewe, sinokukucebisa ukuba uthengise kakhulu izidakamizwa ze-J147.
inkosazana09 / 21 / 2018 kwi-1: 58
Le nqaku yabhalwa ngendlela enoba ngabafundi malunga nezidakamizwa ezihlakaniphile banokuqonda ngokucacileyo. Ndiya kubacebisa abo banokukhubazeka kwengqondo.
maureen09 / 21 / 2018 kwi-1: 53
Isithuba esibonisa abantu abakholelwa kwiNootropics. Kodwa akufanele kuthatyathwe ngokungenangqungquthela, ndikholelwa ukuba kufuneka kuboniswe ukubonisana.
USamuweli Weru09 / 20 / 2018 kwi-11: 39 ntambama
Ndibukele bengenamkhawulo kwaye ngaba i-nootropics (njengeJ147) kwimarike namhlanje ayikho into engakholekiyo. Nangona kunjalo, zonke iziyobisi zineempembelelo zecala kwaye enye ingongoma ebalulekileyo omnye kufuneka aqwalasele ngaphambi kokuthenga.
UCaptain U09 / 20 / 2018 kwi-10: 23 ntambama
Ngaba oku kukhuselekile kuba ngabanye abadlali? Yintoni endiyidingayo ukukhusela ukuba ndifuna ukuzama le Phenylpiracetam? Ngaphezulu kwekharityhulam akuyi kunqumla.
Mach09 / 20 / 2018 kwi-9: 34 ntambama
Yintoni ephakanyisiwe ngala magama? Ewe, ukuba kukho kwibra unako ukukwazi ukuba yenzululwazi. Nangona kunjalo, nantsi into ephathelene neNootropics, Ukuba oku kuvela kwikhefri engeyiyo yonke into iya kukwazi.
Bradley Lavender09 / 20 / 2018 kwi-3: 57 ntambama
Kuyamangalisa zonke iipropati zeNootropiki kunye nokuphuculiswa komzimba. Ndiyazibuza ukuba zikhona ezinye iziyobisi eziyingozi kwiimarike nangona ziphumo ezikhawulezileyo. Enkoso ngokwabelana.
I-Curt Rancher09 / 20 / 2018 kwi-3: 53 ntambama
Ndafumana imvelaphi yasePenylpiracetam eRussia ngokukhethekileyo. Oogqirha kufuneka ngokucacileyo balumkise izigulane malunga nefuthe elide kunye neendlela ezikhuselekileyo. Enkoso ngokwabelana!
Auk09 / 20 / 2018 kwi-6: 22
Le yithuba elineenkcukacha ezichanekileyo zezidakamizwa ezihlakaniphile. Ndiqinisekile ukuba phantse wonke umntu ofunda oku uya kufuna ukusebenzisa la mayeza.
Boma09 / 20 / 2018 kwi-6: 18
I-Nootropiki yintsholongwane entsha kubantu abaninzi ndiyakholwayo kuba ndiyithumela le nxu lumano kubambalwa bam bahlobo kwaye ibe yintsha kubo nakuba bacinga ukuthetha nogqirha malunga nayo.
Dean Wright09 / 20 / 2018 kwi-5: 51
Ndacinga ukuba i-nootropiki yayikukhushulwa kweememori ??? Andizange ndiyazi ukuba nefuthe kwi-metabolism yakho. Inomdla.
Trevor Holland09 / 20 / 2018 kwi-5: 49
Abazange bakholelwe ngokwenene amabango malunga ne-nootropics kude kube le nqaku. Ndicinga ukuba banelungelo kubo, ke kutheni ndicinga ngokuzama ukuzama i-nootropics.
Fera09 / 20 / 2018 kwi-4: 59
Uodadewethu ngokuqhelekileyo uthenga ama-nootropics (afana ne-J147) ukusuka kwenye yezinto ezithe zaziwa kakhulu kwiindawo zempilo apha. Ndiza kufuneka ndibonise umthetho we-3 weveki echazwe apha njengoko uthathe ngaphandle kolwazi lwezokwelapha!
happy09 / 20 / 2018 kwi-2: 58
Ukulahleka kweememori akuyiyo into esiyifanele sihlekise ngayo ndicinga ukuba kulungile ukuqhubeka nokukhuthaza nokuphucula iisensi zeengqondo ukuze ziphumelele.
amika09 / 20 / 2018 kwi-2: 47
Kuya kuba kuhle ukuhlala uqinisa amandla omzimba kwaye ezi ziyobisi (J147) ziza kunceda umntu afinyelele oko. Okulungileyo ukuba kukho uluhlu lokudada.
Kitty Pryde09 / 19 / 2018 kwi-10: 00 ntambama
Oku kuya kuba sisiza esingenakuthathwa ngokungahleli. Oku akusiyo i-candy eli nqaku lisithi kakuhle malunga nendlela yokuthatha iPenylpiracetam. Yiyiphi into entle. Ukunyaniseka kukusoloko kukuhle ukubona.
Kurt09 / 19 / 2018 kwi-9: 56 ntambama
Ikhumbuza i-movie engenamkhawulo weBrad Cooper onesisisi esinemiphumo efana neziyobisi zePhenylpiracetam; Modafinil; Armodafinil; Noopept; Sunifiram; Bromantane. Ndiyathemba ukuba le nto ayisebenzisi kakubi.
ibranti09 / 19 / 2018 kwi-7: 23 ntambama
Ulwazi olukhulu kulabo bafuna ukwandisa ulwazi lwabo malunga neNootropics (njengeJ147). Kuya kuba luncedo kakhulu kwingqondo.
Mary09 / 19 / 2018 kwi-7: 15 ntambama
Izidakamizwa zeMicrosoft (njengeModafinil; Noopept) ongenakufuna ukuba yedwa.Kodwa ndicinga ngokuvakalayo.Kodwa oku kulungele phantsi ngaphandle kokubonisana neengcali. Ndiyathemba ukuba kufuneka kuthathwe ngumyalelo wonyango.
Burrows ye-Landen09 / 19 / 2018 kwi-4: 59 ntambama
I-Phenylpiracetam izandile ngathi inamandla okuphulukisa ngokwengqondo nangokwenyama. I powder J147 ivakalisa kakhulu uncedo kumandla akho engqondo ngaphandle kokuvumela ukuba ulahlekelwe ngumzimba wakho. Enkoso ngokwabelana!
Mozer Torancher09 / 19 / 2018 kwi-4: 54 ntambama
Izandi ezifana nezilungiso ezincedo kunye nenkcazo ecacileyo yemiphumo yazo yokusetyenziswa kwePenylpiracetam. Enkoso ngokwabelana!
Marco Antonio09 / 19 / 2018 kwi-10: 45
Ndiyayiqonda indlela oku kukhulule ngayo eli nqaku malunga neziyobisi ezifanelekileyo (iiNootropics). Nditsho ngokutsha kulo, ngoko ndikhangele amanye amanqaku malunga nalo. Lo unceda ngokuqinisekileyo!
Kennedy09 / 19 / 2018 kwi-10: 43
Andiyithandi kakhulu ngeeNootropiki, kodwa ndicinga ukucela ugqirha malunga nalo kwaye ukuba umzimba wam unokwamkela ngokufanelekileyo i-Phenylpiracetam. Yonke into emitsha kum SmartDrugs, ngoko ndiza kumba ngokujonge kwaye ndiyiqonde le nkunkuma entsha.
UJessica Jonas09 / 19 / 2018 kwi-8: 58
I-Nootropics (i-Smart Drugs) iyona nto ibhetele. Akuncedi kuphela ukunceda ukuqinisa ingqondo yengqondo, nazo zinceda ekulahlekeni kwesisindo. Ndithatha i-Modafinil kwiminyaka eyi-5 ngoku kwaye iinzuzo ziyabonakala.
Earl Warner09 / 19 / 2018 kwi-8: 55
I-Phenylpiracetam yamnceda ndinciphisa ubunzima. Kodwa inyani, ngokwenene kufuneka uyithathe ngokufanelekileyo kwaye ngokufanelekileyo. Ngaphandle koko awuyi kuvuyela izibonelelo zayo.
Phumlani09 / 19 / 2018 kwi-3: 06
Abo banenkinga yokulahlekelwa kwememori kufuneka bazame ukuthenga i-Phenylpiracetam kuba njengento ekhuthazayo kunceda ukukhulisa amandla okukhumbula. Kuya kuba yinto enhle kubantu abadala.
Felix09 / 19 / 2018 kwi-2: 59
Ndiyathemba ukuba abasebenzisi bePenylpiracetam (iCarphedon) i powder baya kukhunjulwa ukuba bathathe ingqalelo kwiimilinganiselo ezicetywayo zokuphepha ukusetyenziswa kakubi kwalo. Ndikholelwa ukuba ukuya kwinqanaba elichanekileyo liya kuzisa umphumo omkhulu.
Vikram Parmar09 / 18 / 2018 kwi-10: 54 ntambama
Zonke iiNootropics (i-Smart Drugs) zinceda ekulahlekeni kwememori.
admin, admin09 / 18 / 2018 kwi-10: 37 ntambama
Ewe, i-Phenylpiracetam ithandwa kakhulu kwaye ishushu esithengiswayo kwimarike ngoku.
admin, admin09 / 18 / 2018 kwi-10: 34 ntambama
Zizo zonke iimveliso zethu ezithengisa kakhulu! ^ _ ^
UDavid Tjoe09 / 18 / 2018 kwi-10: 33 ntambama
Ngokukrakra, ngokwenene ndifumana ulwazi oluncedo apha apha malunga neziyobisi zePhenylpiracetam. Ndiphantse ndingazisebenzisi zonke iintlobo zamachiza kwiimarike, ndikhetha ukusebenzisa iindlela zendabuko / ngokwemvelo nangona inkqubo yokuphulukisa ibonakala ihamba kancane.
Alex Summers09 / 18 / 2018 kwi-8: 54 ntambama
Into elungileyo umbhali uthathe ixesha lokufaka kwiikhowudi ndithetha i-Phenylpiracetam dosage kunye nayo yonke into endiyithandayo kuba andingazi nto ngalokhu. Nangona kunjalo, ukugweba kula ma-specs ndifuna isidayirha ngaphambi kokuba ndifumane.
Scott Summers09 / 18 / 2018 kwi-8: 17 ntambama
Ngokusekelwe kwenkcazo, andinakunceda kodwa qaphela ukuba i-Phenylpiracetam (i-Phenotropil) iyisisulu se-racetam esivela kwiPiracetam apho ukuguqulwa kwamanye kuphela kudibanisa iqela le-phenyl kwisakhiwo sayo.
Moz Chesk09 / 18 / 2018 kwi-3: 18 ntambama
Iifomsules zePhenylpiracetam kunye ne powder kubonakala ngathi zinempembelelo enkulu kwizinga le-molecular and cognitive level. Ndiyathanda ukuba bakhabe ngokukhawuleza kwaye banyuse ukunyuka komzimba kunye nomzimba ngokukhawuleza konke kanye.
Maury Cheskes09 / 18 / 2018 kwi-3: 12 ntambama
Kukhulu kakhulu ezi ziNototropics (iPhenylpiracetam) zinomphumo onjalo kwingqondo yakho kunye nokusebenza komzimba jikelele. Ndiyathanda ukuba kukho izikhokelo ezikhokelwayo kwimizimba yomzimba ngamnye kunye nenkcazo ecacileyo malunga nendlela abasebenza ngayo. Enkoso ngokwabelana!
Kuttan09 / 18 / 2018 kwi-10: 56
Liyilithuba elihle ngokwenene. Ndifumene izinto ezininzi malunga nokulahleka kwesisindo kwi powder online ngaphambili kodwa kubonakala kungaphelelanga.
Mikaella Clair09 / 18 / 2018 kwi-10: 37
Andiyathembi ngokuqinisekileyo iMicrodrugs enokuba ndingaba thabathe. Ndicinga ukuba ukuguqula i-Smart Drugs ayinakwenza ubomi babantu bube bhetele. Andikuchasene nale sifundo, ndandifuna ukuba abantu baqaphele ukuba ukuba bafuna ukusempilweni bangayiqala indlela engokwemvelo.
Charlene G09 / 18 / 2018 kwi-10: 33
Ndixhalabile. Kodwa ngokuqinisekileyo ndingayisebenzisa le michiza, ndiyazi ukuba ingaba nendima njani ekuvuseleleni umzimba, ngokukodwa ngohlobo lomsebenzi wam nokuqwalasela ubudala bam, kuya kuba nzima ukuqhubeka. mhlawumbi ndiza kuthenga i-sibutramine powder kamva.
Amir Guten09 / 18 / 2018 kwi-9: 29
Ngoko oku kubizwa ngokuba yi-Nootropics. Abantu "abahlakaniphile" bazinyusa ngeootropics ukuze bafike phambili.
Amil-lionaire09 / 18 / 2018 kwi-9: 24
Ngaba zikho na iiNootropics (i-Smart Drugs) ezinceda ngxaki yengqondo?
si kelelwe09 / 18 / 2018 kwi-8: 30
Ndicinga ukuba abantu abajongene noxinzelelo olunzulu kufuneka bazame i-Phenylpiracetam kwiinkcukacha ezi ngolu hlobo lokuphonononga ndiza kuba luncedo kakhulu kwaye ndiyakwazi ukuzama ukwenza umsebenzi.
uthando09 / 18 / 2018 kwi-8: 24
Oku kutsha kum, ndifunda nje ngeNootropics (i-Smart Drugs) .Ndiya kufunda ngaphezulu kwipowyl yePenylpiracetam nje nje ngempembelelo onayo emzimbeni.iyoyikeka ingenangxaki xa izidakamizwa ziphelile.
AJ09 / 18 / 2018 kwi-1: 34
Konke oku kumnandi kum. Andizange ndibe nalo naluphi na uhlobo lwengxaki kunye nendlela endinjengomntu ngokubhekisele kwengcinezelo, njl (endiqinisekisileyo ukuba andihlali kwizinto ezininzi ezimbi kwaye ndiqinisekise ukuba nditya ukutya ukutya kunye nokuphila okunempilo), kwaye ewe, ukwenza izidakamizwa ezindikrakrayo (ngaphandle kokuba ndigula kwaye ndifuna ukuthatha amayeza kuwo). Ndifuna nje ukwazi indlela i-nootropics ekhuselekileyo ngayo ngaphambi kokuba ndiyifake nantoni na ukuba ndifanele. Nangona kunjalo, ukujonga eli nqaku kukubonakala kungabi kubi.
Pritesh Vishwakarma09 / 18 / 2018 kwi-12: 42
Zonke i-Nootropics ayilungile impilo yakho yonke. Ezinye zamachiza alo zibhalwe kwiluhlu lwezokwehla kwaye azilungele umntu wezemidlalo.
Jerry09 / 17 / 2018 kwi-11: 27 ntambama
Ndiya kuthanda ukuzama i powhenpipietam powder ukuze kuphuculwe ingqondo kunye nokuphucula imizwelo. Ndiba nzima kakhulu iintsuku kwaye ngezinye amaxesha ndiyichaphazela ukucinga kwam. Ndiqinisekile ukuba kuya kunceda kakhulu.
Enyi09 / 17 / 2018 kwi-11: 19 ntambama
Omnye Ugqirha omkhulu, kuya kuba lula kakhulu ngoku ukwazi zonke iinkcukacha malunga neNootropics ezilungileyo ngoku kwiimarike. Kukulungele ukufunda iindidi zeziyobisi ukuze ufumane umgangatho ngamnye kumzimba ngamnye.
I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike ye-Armodafinil	Imibuzo ye-8 ukuzibuza ngaphambi kokuba uthathe i-Cetilistat powder